HDPE Mvura Inopa Pipe, HDPE Drainage Pipe, Simba Pipe - Xinqihang
Tsvaga Wako Wepedyo Wekutengesa Mumiriri
Zvinowanzozivikanwa kuti mapaipi uye zvigadzirwa mune thermoplastic zvinhu zvinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri uko kuendesa zvinwiwa zvine simba uye magasi zvinoda zvemhando yepamusoro zvekuvaka, zvine yakanakisa ngura kuramba.
Unyanzvi manotsi anoitirwa kupa yakadzama hurukuro hurukuro yemhando dzakasiyana dzekugadzira uye kumisikidza vinidex pombi uye fittings masystem. Aya anotevera ehunyanzvi manotsi aripo
Kana PE pombi ichigadziriswa, hapana inorema simbi munyu inosimudzira inowedzerwa, izvo zvinhu hazvina chepfu, hapana kuyera dura, hapana kubereka mabhakitiriya, uye inogadzirisa kusvibiswa kwechipiri kwemvura yekunwa yemumaguta.
Kwakanaka ngura kuramba
Kunze kwezvishoma zvine simba maokisheni, inogona kumira kukukurwa kwemhando dzakasiyana dzemakemikari midhiya; hapana electrochemical corrosion.
Hupenyu hwakareba hwebasa
Pasi pekuyerwa tembiricha uye kumanikidza mamiriro, PE mapaipi anogona kushandiswa zvakachengeteka kweanopfuura makore makumi mashanu.
Kwakanaka kukanganisa kuramba
Pombi ye PE ine kuomarara kwakanaka uye kwakanyanya kusagadzikana kusagadzikana, uye zvinhu zvinorema zvakamanikidzwa zvakananga kuburikidza nepombi, izvo zvisingazokonzere kuti pombi itsemuke.
Yakavimbika kubatana kuita
Iko kusimba kweye PE-inopisa inopisa-yakanyungudika kana magetsi-akanyungudika akabatana akakwirira kupfuura ayo epombi muviri, uye iwo mubatanidzwa hauzoputswa nekuda kwekufamba kwevhu kana mutoro mupenyu.
Kuita kwakanaka kwekuvaka
Mapaipi akareruka huremu, iyo yekutenderera iri nyore, kuvaka kuri nyore, uye mutengo weprojekti wakaderera.
Mapaipi eHDPE akareruka kupfuura mapaipi ekongiri, mapaipi akakiyiwa uye mapaipi esimbi. Izvo zviri nyore kubata uye nekuisa, uye kudzikisa manpower uye zvekushandisa zvinodiwa zvinoreva kuti iyo yekumisikidza mutengo weprojekiti wakadzikira zvakanyanya.
Low kuyerera kuramba
HDPE pombi ine yakatetepa yemukati uye iyo Manning coefficient iri 0.009. Iko kutsetseka kushanda uye kusiri-kunamatira zvivakwa zvinovimbisa kuti HDPE mapaipi ane yakakwira yekuburitsa inokwana kupfuura echinyakare mapaipi, uye panguva imwecheteyo inoderedza kumanikidza kurasikirwa kwepombi uye nekushandisa kwesimba kwekufambisa kwemvura.
pe mvura pombi
Isu tiri Mapurasitiki uye Nyanzvi dzeGeosynthetics
Kambani yedu inozobatana nemwoyo wese kushamwari kubva kumatunhu ese neiyo pamwe pfungwa ye "mhando yepamusoro, yepamusoro mukurumbira, basa repamusoro" kugadzira ramangwana riri nani!
Mumakore achangopfuura, pamwe nenyika chengetedzo yesimba uye marisheni ekuderedza marongero uye ...
Pe pombi hunhu uye chiyero chekushandisa
Mune iyo yekudonha mvura uye system yekupa mvura, mapaipi chikamu chakakosha chayo, saka mhando ...